पुरुषहरु अश्लिल फिल्ममा झै सेक्स पोज किन चाहन्छन् ? जानी राखौ - ♣भिडियो जुलुम♣
Homeमनोरन्जनपुरुषहरु अश्लिल फिल्ममा झै सेक्स पोज किन चाहन्छन् ? जानी राखौ
श्रीमती या यौनसाथीसँग प्रायजसोः पुरुषले ब्लु फिल्ममा देखे वा अश्लील किताबमा पढेजस्तो यौन सहकार्यको अपेक्षा गर्छन् । सामाजिक र पारिवारिक परिवेशका कारण महिलाहरू भने यौनक्रियामा पुरुषले भनेजस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् वा चाहन्नन् । त्यस्तोमा पुरुषहरूले भन्ने गर्छन्, ‘के गर्ने, श्रीमतीलाई मनै हुँदैन या श्रीमती कस्ती ‘कुल’… भनेर । फलानो जस्तो ‘हट’ भए पो भन्ने गुनासो पुरुषभित्र पलाउन थाल्छ । त्यस्ता खाले महिलामा यौन चाहना नै नहुने भने होइन । यौन चाहना भनेको कुनै मेसिनजस्तो बटन दबाउनेबित्तिकै सुुरु हुने वा अन्त्य हुने हुँदैन ।
उचित वातावरण, मनोभाव बुझ्ने र एक अर्कामा प्रेम र त्यही अनुरूप व्यवहार गर्न सकिए यस्तो गुनासो गरिरहनु पर्दैन । केही महिला या पुरुष जैविकीय रूपमा यौनप्रति बढी निष्क्रिय हुने या सक्रिय हुने गर्छन् । त्यसो भए पनि उचित वातावरणको निर्माण र एकअर्काको भावना बुझ्ने हो भने हरेकको यौनजीवन उत्तम हुन सक्छ । सन्तान प्राप्तिपछि प्रायःजसो महिलामा यौनइच्छा नहुने भन्ने गरिन्छ । अनुसन्धानहरूले भने सन्तान जन्मिएपछि महिलामा उत्कर्षसँग सम्बन्धित अंगहरू बढी संवेदनशील हुने भएकोले चरमोत्कर्षको तीव्रता झन् बढ्ने तथ्य पत्ता लगाएका छन् । सुखद यौनजीवनका लागि एकअर्काप्रति स्नेह जति आवश्यक छ त्यत्तिकै जरुरी छ सहवासका लागि गरिने पहल ।
महिलाहरू स्वयम् आफैं सहवासका लागि कमै पहल गर्न रुचाउँछन् । पुरुषले नै उचित वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । तपाईँले पहल गर्नुको अर्थ सोझै यौनक्रिया गर्नु भने होइन । कतिपय अवस्थामा बच्चाहरू साना छन्, या उनी थाकेकी छिन्, तनावमा छिन् या अन्य कारणले असहज अवस्थामा छिन् भने तपार्इँको पहलमा उनले क्रियाशीलता नदेखाउन सक्छिन् ।
यस्तोमा महिला साथीको मनोभावलाई बुझेर पहल गर्नुपर्दछ । साना बच्चाहरू भएको अवस्थामा महिलाहरू निकै थाकेकी हुन्छिन् ।बच्चाहरू उठ्ने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ । यस्तोमा बच्चाहरू सुतिसकेपछि पारिवारिक कुरासँगै यौनका कुराकानीतर्फ वातावरण मोड्नुपर्दछ । साँझपख बढी थाकिने या पर्याप्त समय नहुने अवस्था छ भने बिहानको समयमा यौनसम्पर्क गर्न सकिन्छ । बिहानको यौनसम्पर्क झनै उत्तेजक हुने कतिपय अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । बिहानदेखि साँझसम्म बच्चाहरूका बीचमा महिलाले बच्चाका आवश्यकता पूरा गर्दा, घरको कामकाज आदिमा व्यस्त रहँदा महिलाहरू यति थाक्छन् कि, कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई यौनेच्छा नै हुँदैन । महिलाहरूले पनि घरको कामकाजलाई व्यवस्थित गरेर आफूलाई आराम दिलाउनु पर्दछ । चिड्चिडापन, थकानबाट मुक्तिका लागि सकेसम्म आरामको वातावरण बनाउनुपर्छ । पुरुष सदस्यले पनि स्थिति बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।
धेरैचोटी इच्छा हुँदा पनि श्रीमान्लाई भन्न लाज मान्ने या आफ्ूलाई चुम्बन या आलिंगन वा अन्य कुनै खास प्रकारको स्पर्श श्रीमान्ले गरिदेओस् भन्ने चाहना पनि महिलाहरूमा हुन्छ । उनीहरूले सोझै भन्न सक्दैनन् । तर श्रीमान्ले पहल नगरेको अवस्थामा पनि आफूलाई सहज पारेर स्वयं पहल गर्ने अथवा श्रीमान्को पहलमा साथ दिएर यौनजीवनलाई सुखद बनाउन सकिन्छ ।मुख्य कुरा, यौनसम्पर्क गर्दा तपाईँलाई के राम्रो लाग्छ, श्रीमान्ले कस्तो गरिदिए झन् उत्तेजना आउँछ भन्ने कुरा श्रीमान्लाई बताउनु राम्रो हुन्छ । यौनसम्पर्क गरिरहेको बेला भने यस्तो गर्नु हुँदैन ।
बरु यौनसम्पर्क अघि र अन्य बेला समय मिलेको अवस्थामा श्रीमान्सँग यस्ता कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । एकअर्कासँग कुरा गर्ने, बिस्तारै सामान्य कुराकानीलाई यौनमय वातावरणतर्फ मोड्ने, प्रेमपूर्वक एकअर्काका कुरा सुन्ने, स्पर्श गर्ने र सुस्तसुस्त अँगालोमा बेरिँदै, कस्सिँदै यौनसम्पर्कतर्फ उन्मुख हुने हो भने दुवैलाई चरम सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । पुरुषले यसका लागि हतारो गर्नु भने हुँदैन । पुरुषको तुलनामा महिला ढिलो उत्कर्षमा पुग्ने गर्छन् । महिलालाई यौनका लागि पूर्णरूपमा तयार गरेरमात्रै सहवास थाल्नु राम्रो हुन्छ । पुरुषहरूले आफू छिटो सुरु गर्ने र छिटो स्खलित हुने गर्नाले अर्कोपल्ट महिला साथी यौनक्रियाका लागि सक्रियता नदेखाउन सक्छिन् । पुरुषहरूले पुस्तक, फिल्म, कथा या गफहरूमा भनिएजस्तो यौन हुँदैन र महिलाहरू रेडिमेडरूपमा पूर्ण उत्तेजनामा पुगेका हुन्छन् भन्ने कुरा सोच्नु हुँदैन । सहवासमा कति लामो समयसम्म गरियो या कतिचोटी गरियोभन्दा पनि कति उत्तम तरिकाले गरियो वा कति सन्तुष्टि पाइयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाको शरीरमा हुने उत्तेजनाका स्थानहरू महिलाअनुसार फरकफरक हुन सक्छन् । पुरुषले यस्ता स्थान पत्ता लगाएर स्पर्श गर्न सके उनीहरू छिटो उत्तेजनामा आउन सक्छन् । चरमोत्कर्षको बिन्दुमा भने महिला र पुरुष फरकफरक समयमा पुग्न सक्छन् । महिलाहरू पुरुषको जस्तो एकचोटी चरमोत्कर्षमा पुगेर स्खलित भएजस्तो हुँदैनन् । उनीहरू एकभन्दा धेरैचोटी चरम आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छन् । यौन सम्पर्कको बेला ध्यान दिने हो भने महिलाहरूका यस्ता चरमोत्कर्षका पलहरूलाई धेरै पटक अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
गाउघरकी चेलीको जोशिलो नाच |